Uphelile umhlangano wesibili we-VNIIK kanye neSoyuzkrakhmal Association - I-Potato System Magazine
Uphelile umhlangano wesibili we-VNIIK kanye neSoyuzkrakhmal Association
I-Soyuzkrakhmal Association kanye ne-All-Russian Research Institute of Starch Products baqede umhlangano wesibili wezifundo zokuvuselela. Ingqungquthela ibibanjelwe kwi-inthanethi kusuka ngomhlaka 6 kuya ku-8 Ephreli 2021.
Lo mhlangano ubuhanjelwe ngabamele izinkampani eziyi-16 ezivela eRussia, e-Ukraine naseKazakhstan: “DP-I Group”, “Symbio”, ChMP “VIMAL”, isitshalo seMglinsky starch, “NT-Prom”, “AMINOSIB”, Russian Biofuel Association, Potato Union, ASTON Starch Products, BioOperations, PROSTOR, ISTAGRO DON, SEZ PPT Alabuga, KRAKHMALOPRODUKT, Kabardinsky Starch Plant, Premix Plant No. 1.
Izikhulumi zalo mhlangano bezihola phambili abacwaningi nochwepheshe bezobuchwepheshe embonini yesitashi kanye nemakethe yokucubungula okujulile kwezinto zokusetshenziswa zemifino.
UVladimir Goldstein, Ph.D., oyinhloko yomnyango wokucubungula izinto zokusetshenziswa eziqukethe isitashi e-All-Russian Research Institute of Starch Products, ukhulume ngamathuba okushintsha izinkomba zobuchwepheshe nezomnotho zokucubungula okujulile okusanhlamvu okusanhlamvu nokolweni ku-isitashi nemikhiqizo.
UDidier Lacondemine, uMqondisi Wezentengiso i-Europe kanye ne-CIS, i-Hydro-Thermal Corporation, banikeze isethulo kubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi beHydro-Thermal Corporation: izinzuzo zokujova umusi oqondile ekukhiqizeni isitashi.
UValentina Pushkar, inhloko yomnyango wokumiswa nokuqiniswa kwe-All-Russian Research Institute of Starch Products, uchaze umkhuba wokuthuthukisa imininingwane yezobuchwepheshe kanye nemiyalo yezobuchwepheshe yemikhiqizo yomkhakha wesitashi.
U-Egor Vinokurov, Injiniyela Wezentengiso Wengxenye Yezinsiza Zokudla Nezemithi, u-AlfaLaval Potok, ukhulume ngesihloko esithi: "Izinkombandlela eziyinhloko zokwehlisa izindleko zamandla ngesikhathi sokusebenza kwama-evaporator kanye ne-heat exchangers."
UDmitry Didrich no-Emmanuel Joncquez, ochwepheshe bezobuchwepheshe eMnyangweni we-MBR (ulwelwesi lokuhlunga ulwelwesi lwe-bioreactors) e-Alfa Laval, batshele ababambiqhaza ngezici zezindawo zokwelashwa ezikhiqiza isitashi nemikhiqizo ye-biotechnology, bachaza izinhlobo zezindawo zokwelashwa, izigaba zokwelashwa, ukuqonda izixazululo.
UMongameli weSoyuzkrakhmal Association u-Oleg Radin uphawule ngokuphela komcimbi: “Ukubanjwa kwezingqungquthela zaminyaka yonke zobuchwepheshe zonjiniyela bamabhizinisi sekuyindawo yendabuko yokuhlangana kongoti bezimboni. Ngenxa yemikhawulo yamanje, siziphatha ku-inthanethi. Kepha esikhathini esizayo esiseduze sizomemezela ingqungquthela engaxhunyiwe ku-inthanethi mayelana nezitayela namathemba emakethe yokucubungula okusanhlamvu ejulile. Inhloso yethu njengeNhlangano ukwakha inkundla yokuxhumana nokuthuthukiswa kwababambiqhaza abakhona nabangahle babe khona emakethe yokucubungula okusanhlamvu okujulile. Siyethemba ukuthi imicimbi yeSoyuzkrakhmal Association izofaka isandla ekukhuliseni intshisekelo embonini yethu kubatshalizimali nezikhulu zikahulumeni. "
Ukuqoshwa kweWebinar kwezingqungquthela zezifundo zokuqala nezesibili kungathengwa kusixhumanisi: https://starchcunion.timepad.ru/event/1610799/
Source: Insizakalo yezindaba yeNhlangano yeSoyuzkrakhmal
I-Uzbekistan: amazambane okuqala avele emakethe emasontweni amathathu ngaphambili futhi ehla ngokushesha emananini
Uhlelo lokucubungula iziqukathi ezivela emithini yokubulala izinambuzane lube ama-granules e-polymer luzosabalala luye e-Urals, eSiberia naseFar East